DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Deni oo si cajiib ah loogu soo dhaweyay Garacad | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Madaxweyne Deni oo si cajiib ah loogu soo dhaweyay Garacad
Garacad (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Saciid Cabdilaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta gaaray maagaalo Xeebeedka Garacad ee Gobolka Mudug.
Mr. Deni safarkiisa ayaa waxaa ku wehelinaya ganacsato, kuwaa oo doorbidaya in ay maalgashi ku sameeyaan dhismaha dekedda Garacad oo hab isku-tashi ah lagu dhisayo.
Inta uu jooga magaalada Garacad madaxweyne Deni ayaa waxa uu dhagax-dhigi doonaa wajiga labaad ee dhismaha dekedda Garacad, isagoo kormeer ku samayn doona qaybaha ay ka kooban tahay dekedda iyo hanaanka ay u socoto shaqada dekedda.
Dadka deegaanka ee soo dhowaynayay Wafdiga madaxweynaha Puntland ayaa watay sawirro lagu muujiyey Khayraadka dalka.
magaalo xeebeedka Garacad